Soo dejisan NANO Antivirus 1.0.134.90655 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: NANO Antivirus
NANO Antivirus – waa software si aad u ilaaliso kombiyuutarkaaga, oo isticmaalaya horumarkiisa gaarka ah ee barta internetka. Antivirus waxay bixisaa heer wanaagsan oo lagu ogaado fayrasyo kala duwan, nacas, trojans, spyware iyo hanjabaado kale. NANO Antivirus waxay nadaamisaa nidaamka faylka loogu talagalay koodhka xaasidnimada waqtiga dhabta ah iyo xayawaanka isla markiiba ama ka soocaya shay kasta oo shaki ku jiro karantiilka haddii uusan ku jirin liiska ka-reebitaanka. Software-ka ayaa isticmaala teknoolojiyada casriga ah si loo barbardhigo faylasha shaki laga galo macaamiisha antivirus iyo falanqaynta casriga ah si loo ogaado hanjabaad cusub oo aan la aqoon, oo aan weli ku jirin xogta virus-ka. NANO Antivirus waxaa ku jira tarjumaha taraafikada webka oo hubinaya faylasha laga soo duubay internetka ee infekshannada iyo booqashada boggaga loogu talagalay waxyaabaha halista ah. Sidoo kale, NANO Antivirus waxay soo bandhigeysaa sharciyada xakamaynta, isku xirka shabakadaha iyo karantiilka iyadoo la raacayo doorbidkaaga.
Ogaanshaha fayrasyada feylka iyo polymorphic
Teknooloojiyada badbaadinta daruuriga
Falanqaynta faylka faafinta
Raadinta shabakada internetka
Soo dejisan NANO Antivirus
Faallo ku saabsan NANO Antivirus
NANO Antivirus Xirfadaha la xiriira
Howard E-Mail Notifier – barnaamij caawimaad leh oo lagu ogeysiinayo emaylada soo gala iyo farriimaha ku jira shabakadaha bulshada ee nidaamka kombiyuutarka.